Xaqiiqda Kordhinta iyo Ficil ahaanta waxay Noqon Doontaa Wax Muhiim ah Ganacsiga | Martech Zone
Xaqiiqda Kordhinta iyo Ficil ahaanta ayaa Noqon Doonta Wax Muhiim ah Ganacsiga
Khamiis, May 19, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Marka dadku i weydiiyaan saadaalin, waxaan si caadi ah ugu tilmaamaa qof kale. Ma ahi mustaqbal doon badan, laakiin waxaan hayaa rikoor fiican oo wanaagsan oo aan ku arko sida horumarka tikniyoolajiyadu u saameyn doono dhaqanka iibsiga. Mid ka mid ah tikniyoolajiyadda aan si aamusnaan ah uga aamusay ayaa noqotay xaqiiqda la kordhiyay iyo xaqiiqda muuqaalka ah. Waa dhan qabow, laakiin waxaan aaminsanahay inaan wali dhowr sano ka maqanahay isticmaalka wax ku oolka ah.
Haddii aad tahay dukaanka tafaariiqda, in kastoo, xoogaa waan ku dhiirranayaa saadaasha saameynta. Saamaynta ganacsiga iyo ganacsiga ayaa leh saameyn aad u baaxad weyn taraafikada tafaariiqda sidii hore. Iibka tafaariiqda ayaa sii xumaanaya… si fududna looguma iibin karo dhibaato dhaqaale.
Macaamiisha waxay barteen inay aamin aaminka internetka. Iyada oo isla maalintaas la raraayo magaalooyin badan, ma jiraan wax badan oo sabab ah oo loogu sii istaagi karo dukaanka maxalliga ah mar dambe. Laga soo bilaabo raashinka ilaa gawaarida, khadka tooska ah ilaa bixinta albaabku wuxuu u socdaa guud ahaan. Sababta kaliya ee macaamiisha aysan gebi ahaanba u aqbalin iibka khadka tooska ah ayaa ah inay weli jirto taabashada iyo khibradda.
Laakiin xaqiiqda la kordhiyay iyo xaqiiqda dalban ayaa taa beddeli doonta.
Inkasta oo khubarada warshadaha ay saadaalinayaan ciyaaraha iyo meelaha safarka ah si ay uga faa'iideystaan ​​inta badan, waxay isku raaceen in teknolojiyadda VR / AR ay beddeli doonaan habka aan wax u adeegsanno sidoo kale. Sida aaladaha mobilada ay u rogeen eCommerce (mCommerce waxay xisaabisaa in ka badan 34% dhammaan macaamillada ganacsiga eCommerce adduunka), Tiknoolajiyada VR iyo AR waxay beddeli doonaan adduunka eCommerce ee aan ognahay mustaqbalka dhow.
Faahfaahintan ka timid Maven E-commerce ayaa keena xaqiiqadu of technology this nolosha. Waa kuwan tusaalooyin lamaane ah oo ah halka lagu kordhiyay iyo xaqiiqda dhabta ahi ay bixinayaan a waayo-aragnimo fiican Dabaqa ka hooseeya dabaqa.
Iibsiga alaabta guriga cusub? Qiyaas dheeri ah iyo mala awaal… kaliya u isticmaal xaqiiqda la kordhiyay si aad alaabada ugu dhigto waqtiga dhabta ah qolkaaga.
Iibsasho gaari? Maxaad ugu dhaqaaqi weyday qolka xaqiiqda dhabta ah ee ganacsadaha oo aad ku tijaabisaa gaarigaaga ku xiga sameynta, tusaalaha, midabada iyo waxyaabaha lagu daro ee aad raadineyso. Oo hel booqasho dalxiis oo dhammaan astaamaha ah.
Iibsiga dharka? Eeg sida aad ugu egtahay iyaga guriga, xitaa hubinta qiyaasta saxda ah.
Alaabta guriga, kumbuyuutarrada muusigga ah, gamification, tours gawaarida dalwaddii, qolalka labiska virtual wax kasta oo suurtogal ah si kor loogu qaado waayo-aragnimada dukaameysiga raaxada ee xafiiskaaga ama fadhiga fadhiga. Tafaariiqleyda aan korsaneynin ayaa dhaqso looga tegayaa. Macaamiisha ayaa sidoo kale garwaaqsada. Sanadkii la soo dhaafey, dadka yiri xaqiiqada dhabta ah ayaa wax ka badali doonta qaabka ay wax u dukaameystaan ​​waxay ka korortay 37% ilaa 63%.
Tags: arxaqiiqda la kordhiyayecommerceciyaarahaganacsiga evenbuugaagta lagu qoro ee wareegaOleg Yemchukqolalka labiska dalwaddiiAlaab gurixaqiiqada dalwaddiitours gaari dalwaddiivr